CAD loo tegayo ama is casilaad CAD? - Geofumadas
Mashruuca Nidaamka CAD ama Kaarka Isdiiwaangelinta?
Luulyo, 2009 AutoCAD-AutoDesk
Daabacaadda cusub ee AUGI World horey ayaa u timid, iyada oo leh waxyaabo aad u xiiso badan, sida la shaqaynta SketchUp, pininos leh .NET iyo wax la mid ah Revit.
Nooc isbarbardhig ah oo uu sameeyay Mark Kiker ayaa soo jiitay dareenkeyga, oo ku saabsan doorashada meesha loo socdo ee ku habboon doorashada qalabka CAD. In kasta oo jihaynteedu ay ka badan tahay naqshadda halka loo socdo marka loo eego iibinta meel jirta, haddana waxaan u malaynayaa inay tahay maqaal weyn, waxaan u malaynayaa in maalin maalmaha ka mid ah kuwa wax farsameeya ay tixgelin doonaan isla wax. Arrintaas, haddii ay ahayd meel loo dalxiis tago, sidee loogu siiyaa socotada ikhtiyaar safarkiisu uusan ka dheereyn waqtiga ay halkaas joogi doonaan, halkaas oo qancinta saddex maalmood ay magdhow u tahay keydka 6 bilood, halkaasoo wixii dheeri ah oo ay bixiyeen aan la seegin. beddelaadyo kale, iyo wixii ka sarreeyaba waaya-aragnimadu inay tahay sidaas oo kale oo ay mudan tahay in lagula taliyo ma aha oo keliya kibir laakiin sidoo kale diyaar u ah inay mar kale ku celiso.
Taasi ma sheegeyso haddii ay tahay qadar in ay ku noolaadaan, shaqeeyaan ama soo saaraan; hab xiiso leh, gaar ahaan haddii codsatay maxaa yeelay, inkastoo dokumentiga muuqata in guud ee madal CAD kasta, ma jiraan wax diidaya heer qaar ka mid ah eexda by isticmaalka beeley iyo xiriirka ay la leedahay brand ah.
Heerka adag. Miyuu qaab adag oo si fiican looga fikiray u baahan yahay in la beddelo 2.375 sano oo kasta? Marka waxaan dhihi karnaa taas maxaa yeelay velociraptor ayaa loo magacaabay shafefile Waxaa si weyn loo isticmaalaa, markaa waa inay noqotaa heerka.
Cusboonaysiinta software Ma waxaan u jeednaa liposuction-ka xitaa sanado ama isbadal lagu sameeyo sanado aan caadi aheyn? Way fiicnaan laheyd haddii aysan u baahnayn isku-darka kheyraadka kooxda iyo habka waalan ee lagu ogaanayo nooca dwg ee aan ka helayno macmiil.
Deegaanka waxbarashada Si adag u waafaqsan yahay, kala-soocidda AutoCAD waxay leedahay faa'iido weyn oo ah yaraynta barxada barashada, kuwa kale oo aan caan ahayn waa in ay la dagaalamaan tan.
Warcelinta Haa, laakiin liiska rabitaanka waa mid aad u dheer.
yeela suun qalab weyn. Chanfle!
Kooxda taageerada Haa, Taageerada AutoDesk maaha mid xun, sababtoo ah waxaa jira had iyo jeer had iyo jeer qof ama hareeraha webka oo raba inuu caawiyo.
Wadaagista waa la qiimeeyaa Yaa qiimeeya, sida ugu dhakhsaha badan ee loo qiimeeyay? ... Oh, waxay u tixraacaan boodka dhabarka; waafaqsan
Ha haawin inaad wax wanaagsan sameysid, laakiin noqo kuwa ugu fiican. Waan ku raacsanahay, laakiin ma doonayo inaan naftayda dhinac u janjeero. Sooftiweerku maahan kan ugufiican maxaa yeelay waa kan loogu isticmaal badan yahay, waxaan dhamaanteen ku xasuusanaa Microsoft iyaga oo ku dhagan in tayada Windows ay damaanad qaaday saamiga suuqa ee ka iibsaday barnaamijyadooda.
Lacag ma ahan. Nin, xitaa markaad tagto malab, jacaylku ma yaqaanno deymanka, lacag HADDII WAA MAXAY? marka loo eego dib u soo noqoshada maalgashiga.
Taas ka sokow, waxaan kugula talinayaa inaad akhriso daabacaaddan 'AUGI World', oo dhameystireysa kala duwanaanta ilaha waxbarasho ee loogu talagalay dadka isticmaala AutoCAD oo ay inta badan bixiyaan farsamayaqaanno kuwaas oo sida ugu wanaagsan ugu soo celiya bulshada khibraddooda bilaash ah. Haddii aysan isdiiwaangalin, waxaa habboon in la sameeyo.
Post Previous" Hore Qaab siman oo loogu talagalay Cadastre
Post Next MapInfo: Shalay, maanta, iyo malinta berriNext »